ပြောင်းလဲမှုကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ပြောင်းလဲမှုကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ
Posted by manawphyulay on Jul 2, 2012 in Business & Economics, Community & Society, Society & Lifestyle | 15 comments
အားလုံး ပြောင်းလဲနိုင်အောင် ကြိုးစားရမည်
ဟောပြောပွဲသွားရောက်နားထောင်ပြီး မနော ပြန်လည် ဖောက်သည်ချလိုက်ပါတယ်။
Myanmar Tourism Federation ၏ ကွပ်ကဲမှုဖြင့် Myanmar Hospitality Professional Assocation (MHPA) တွင် ပြုလုပ်သော ပြောင်းလဲမှုကို ရင်ဆိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်က ဟောပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ဟောပြောသွားတာတွေကတော့ နေ့တိုင်း ပြောင်းနေပါတယ်တဲ့။ ပြောင်းလဲမှုက မြန်ဆန်တယ်။ ပြောင်းနေတာကို မပြောပဲ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲဆိုတာကို အရင်သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်။ အများအားဖြင့် လူငယ်တွေအတွက် အဓိကပြောမှာပေါ့လေ။ ပထမဆုံး အနာဂတ်အတွက်ကို စဉ်းစား၊ နောင် ၄ နှစ်၊ ၅ နှစ်၊ ၁၀ နှစ်အတွင်း ဘာဖြစ်ချင်လဲ၊ ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာသာ အစီအစဉ်ချသင့်တယ်။ change ကို လိုက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြရမယ်။ အကောင်းကို မမြင်တတ်တဲ့သူတွေ အခွင့်အရေးရှိလာရင်တောင် အခက်အခဲဖြစ်စေတယ်။ အခက်အခဲဖြစ်တာကို ကြိုဆိုဖို့ လိုတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေဖြစ်နေတာ ကြည့်ရင် အတော့်ကို စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်။ ဒီနေ့နဲ့ မနက်ဖြန်တောင် မတူပဲ ပြောင်းလဲနေရမယ်။
Very interesting and exciting ပဲ။
ပြောင်းတဲ့ပုံစံက မြန်လွန်းအားကြီးတယ်။ ၈ လအတွင်းမှာ ပေါ်လစီ ခြောက်ခါဖြစ်တယ်။ နောက် ကားတွေ ပြောင်းလဲတယ်။ နောက်မိုလ်ဖိုင်းပစ္စည်းတွေ ပြောင်းလဲတယ်။
Volatile and Change
အဓိကကတော့ အလုပ်ရှင်တွေ ပိုအရေးကြီးတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပျော့ပျောင်းဖို့လုပ်သင့်တယ်။
Convert risks into opportunity
Change never over
opportunity to those who grasp it
ခုချိန်မှာ ၀န်ထမ်းတွေကို မှာချင်တာက အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ ပျော်ရွှင်ဖို့လိုတယ်။ မပျော်တဲ့နေရာမှာ မနေပါနဲ့။ ပျော်တဲ့နေရာကို ရွေ့ပါ။ သစ္စာ၊ မေတ္တာတွေ လုပ်မနေနဲ့တော့၊ ဒီနေ့ အဆင်မပြေဘူးလား အဆင်မပြေရင် ထွက်၊ ပြောင်းလဲမှုတွေ ကြားမှာ သူများ ပြောင်းတာကို အပြောင်းမခံနဲ့၊ ကိုယ့်ဘာသာ ပြောင်းလဲနိုင်ရမယ်။ နိုင်ငံကြီး ပြောင်းလဲနေတာ ခေတ်ရဲ့ရေစီးကြောင်းမှာ ကျန်ခဲ့လို့ မဖြစ်ဘူး။ ကိုယ်ပါ လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ရမယ်။
Life actively creating change
Inspivd and movitated ပြောချင်တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားပေးရမယ်၊ သူများကိုလည်း အားပေးနိုင်ရမယ်။
– Crucial Skill စွမ်းဆောင်မှု အရည်အချင်းတွေ ပြည့်ဝနေအောင် လုပ်ရမယ်။
– Work, home and everywhere
– Get results ဆိုတာ လိုချင်တာကတော့ results ပဲ။
– Delicate balance
– Communication, Structure and incenting
– 20 ways to motivate
– Never use threats
– Make people aware of the negaitive
– Carrot onastick (မက်လုံးပေးရမယ်)
– Appeal to people’s selfish nature
ခုခေတ် အတော်များများ ပြောနေသံကြားတယ်။ ခိုင်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့အသံ။ ခိုင်းလို့မရတာ မခိုင်းတတ်လို့။ တိကျတဲ့ လမ်းညွှန်ချက် ပေးရမယ်။ နေရာတကာ လူကြီးတွေ ၀င်မလုပ်နဲ့။ လူငယ်တွေကို လမ်းကြောင်းပေးရမယ်။
– Guide actions
6. Kindness ဆိုတာ ဘာလဲ
ကိုယ်က ညှာရင်၊ မေတ္တာထားရင် ကိုယ့်ဘက်ပါတယ်။ လူငယ်တွေ မကြိုက်တာတွေ ရှိတယ်။ ဘယ်နေ့ ဘာပြီးရမယ်ဆိုတာ လိုတယ်။ ဟိုနေ့မှ ဒီနေ့မှဆိုတာတွေ မဖြစ်ရဘူး။
ခုက ဌာနတွေ မရှိကြတော့ဘူး။ ဌာနတွေမှာ သူနဲ့ငါနဲ့ မတည့်ဘူး။ သူ့မခေါ်နဲ့ဆိုတာတွေ အဖြစ်များတာ Team Spirit မရှိလို့ပဲ။ Team နဲ့သာ အလုပ်လုပ်မယ်ဆို ပိုပြီး အောင်မြင်မှာကို မသိကြတာပါ။
– Environment of cumaradene
အမှန်ရှာမယ်။ ပြီးရင် ချီးကျူးရမယ်။ ဒါမှ လူငယ်တွေ ပိုပြီး တိုးတက်ကြမှာပါ။ နောက် သတိထားရမယ့်အချက်က ချီးကျူးရင် လူအလယ်မှာ ချီးကျူးပြီး ဝေဖန်ရင် တစ်ယောက်ထဲ ဝေဖန်ရမယ်။ ဒါတွေက Management အခြေခံတွေပါပဲ။ ခုတော့ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ချီးကျူးရင် တစ်ယောက်ထဲ ခေါ်ချီးကျူးတော့ သူက ဘယ်သူကို ဘယ်လိုသွားပြောမလဲ။ နောက် ဝေဖန်တော့ အားလုံးအလယ် ဝေဖန်တော့ သိမ်ငယ်စိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်တာပေါ့။ အလုပ်ရှင်တွေ လုပ်သင့်တာကတော့ ၀န်ထမ်းတွေကို ငါဘာလိုချင်လဲဆိုတာထက် မင်း ဘာလိုချင်လဲလို့ မေးတတ်ရမယ်။ အလုပ်မှာ ပျော်မှ ရမယ်။ မပျော်ရင်တော့ ထွက်ပဲ။
မြန်မာပြည်မှာ အရင်တုန်းက Trust မရှိဘူး။ ခုတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောလို့ရပြီ ထင်တာပဲ။ အရင်က သတင်းစာတွေ လူအတော်များများက မဖတ်ကြဘူး။ ခုတော့ ဖတ်လာကြပြီ။ ဒါလည်း ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပဲ။ အရင်က မိဘတွေနဲ့ သားသမီးတွေက အပြန်အလှန်လေးစားတယ်။ ခုက မိဘတွေက သားသမီးတွေကို မလေးစားဘူး။ ပြောလိုက်ရင် မရှည်နဲ ငါ နင်တို့ထက် လူဖြစ်လာတာတို့၊ နင်တို့ထက် တတ်လို့ သိလို့ မိဘလုပ်နေတာတို့ အပြောများလာတယ်။ ဒါကြောင့် သားသမီးနဲ့ မိဘကြား သဟဇာတ မတည့်တာတွေ ဖြစ်လာတာ။
13. Create Challenges
– People happy when progressing towardsagoal
– Don’t expect everyone to do things anyway
15. Constructive critricism
– Don’t let people stagnate
ပျော်အောင် ဖန်တီးရမယ်။ ကိုယ့်ဆီက ၀န်ထမ်းတွေ ပျော်နေရမယ်။ ခုဟာက ဟိုတယ်လာတည်းရင်တောင် ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ မျက်နှာတွေက ၈ ခေါက်ချိုး မဲ့နေကြတယ်။ ငါ့ဟိုတယ်လာတည်းတာပဲဆိုတဲ့အမြင်တွေကိုလည်း ပြောင်းလဲပေးရမယ်။ ၀န်ထမ်းစိတ်ထားတွေ များများသိဖို့လိုတယ်။
– keep communication channels open
– Be aware of potential problems beforeaserious dispute
20. Make its stimulating
Masters these Key Points
– Assaulted by negative thoughts
-Feeling unstoppabile or feeling scared to
to Strategies အချက် ၁၀ ချက်ကို လိုက်နာနိုင်အောင် ကြိုးစားရမယ်။
1. Dress Sharp (သင့်တော်တဲ့ အ၀တ်အစားလိုတယ်။ သပ်ရပ်မှုပေါ့)
2. Walk faster (လမ်းလျှောက်တာကို မြန်သထက် မြန်အောင် ကျင့်ရမယ်။ သတင်းတွေထဲမှာ တွေ့လား အိုဘားမား လေယာဉ်ပေါ်ကဆင်းတာ ခုန်ဆင်းတာမြင်လား။)
3. Good Posture ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကြေငြာဝင် (အားလုံးက ရောင်းကုန်တွေ ရောင်းရမယ်။)
6. Compliment other people (သူများကို ချီးကျူးနိုင်ရမယ်။)
8. Speak up (ဖြေသာဖြေ၊ သိရင်လည်း သိ၊ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေက သိရင်လည်း မသိ၊ မပြည့်တဲ့အိုး ဘောင်ဘင်ခတ်တယ်ပြောခံရမှာစိုးပြီး မပြောပဲနေတယ်။ နောက်တော့ မေးတဲ့သူကလည်း မမေးတော့ဘူး။)
9. Work out (ကျန်းမာရေး လိုက်စားစေချင်တယ်။ ဥပမာ အလုပ်လာပြီဆိုရင် ကားဂိတ် ၂ ဂိတ်စာလောက် ကြိုဆင်းပြီး လမ်းလျှောက်ရင်လည်း ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းတာပါပဲ။)
10. Focus on Contribution (Give နဲ့ Get အရင်က ဘာပေးနိုင်လဲဆိုတာထက် ကိုယ်က ဘာပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ ပြောနိုင်ရမယ်။)
– Anticipate it
– The Future is Yours
– Continually ask ourselves,
– What will happen if…?
ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှာလဲဆိုတာထက် ပြောင်းလဲအောင် ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတာသာ လုပ်ဆောင်ကြဖို့ လိုပါတယ်။
ဟောပြောပွဲကတော့ ဒါလေးနဲ့ အဆုံးသတ်သွားပါတယ်။ ပြောတာတွေ များပေမယ့် မှတ်မိတာလေးပဲ ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အရမ်းများနေပေမယ့် ဖတ်တဲ့သူတွေ ရသပျက်သွားမှာစိုးလို့ တစ်စုတစည်းထဲ ပေါင်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တချို့ပြောတာတောင်က နားထောင်နေတာနဲ့တင် တန်ဖိုးရှိလှပါတယ်။ မှတ်မိတာလေးတွေ ပြန်ချရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
အခုလို ပြန်မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါရှင်
မတ်တပ်ရပ် လက်ခုတ်အကျယ်ကြီး တီးပီး အားပေးသွားပါတယ်ဗျို့…
ဒေါ်စိတ်ဖွေးပိစိ ရေ ….
ဒီလူကြီး ရဲ့ စာတွေကိုဆက်လေ့လာရင် အတော် အကျိုးများပါကြောင်း..
ဆက်ငိုလိုက်ဦးမယ် ကွယ်. .
စွန့်ဦးတီထွင်ဦးရဲမြင့်ပြောတာတွေလည်း တင်ပေးပါဦးမယ်။ မှတ်မိသလောက်ပေါ့လေ… ဖြစ်ချင်တော့ ကင်မရာတောင် အားသွင်းထားရင်း အိမ်မှာကျန်ခဲ့လို့ ဓာတ်ပုံတွေတောင် ရိုက်ချင်ရက်နဲ့ မရိုက်ခဲ့ရဘူး။
ခုတလော ငြိမ်နေပေမယ့် အဲ့သည့်ကလည်း ဆင်မနာကောင်းတွေလုပ်တယ်ဗျ…
ဒု အဖေဘွတ်က ၀င်လို့မရဘူး ဖစ်နေတယ်ရှင်.. ဒါကြောင့် နိုလိုက်မယ်နော်… ငိုလို့ဝမှ နောက်တစ်ခု တင်ပေးမယ် ဟဲဟဲ…
လူငယ်တွေရော လူကြီးတွေပါ နားထောင်သင့်တဲ့ဟောပြောပွဲပါ..
ခေတ်စနစ်ကပြောင်းတာ တကယ်မြန်နေတာ ငြင်းလို့မရတဲ့အချိန်ရောက်နေပါပြီး…
မနောရေ…..ဟောပြောပွဲတော်တော်များများကို တက်ရောက်နားထောင်ဖူးပါတယ်။ ဗဟုသုတပဲရပြီး လုပ်ငန်းခွင်မှာ လက်တွေ့အသုံးချတဲ့အခါ အခက်အခဲတွေ ရှိနေပါတယ်။ အသေးစိတ်ဖတ်ရှူသွားပါတယ်။ လိုအပ်ရင် အသုံးချရအောင်လို့ပါ။
ဒါကတော့ ဟောပြောပွဲတိုင်း တက်ပြီး နားထောင်ပေမယ့် ကိုယ်လိုချင်တာပဲ ယူပြီး မလိုချင်တာ မယူရင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့်လက်တွေ့မှာကျတော့ တစ်ယောက်ထဲ အသုံးချဖို့မဖြစ်နိုင်တာတွေ ရှိကောင်းရှိနေမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဗဟုသုတဆိုတာ ဒီလိုပွဲတွေက ရရှိတဲ့အတွက် ကိုယ်မသိတာတွေ သိရတဲ့အခါ တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ ပွဲလေးတွေမို့ မနောတော့ စိတ်ဝင်စားပါတယ်ရှင်။
မမ မနောရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
Optimist – Difficulties are opportunities.
Pessimist – Opportunities are difficulties.
အစ်မရေ..မွန်မွန်လည်း တင်ရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားနေတုန်း အစ်မ ပို့စ်ကို ဖတ်လိုက်ရတော့ ပိုမှတ်မိသွားတယ်..ဆရာရဲမြင့်ရဲ့ slide တွေပဲ ရခဲ့လို့…
ဆရာရဲမြင့်ဟောပြောချက်တွေကိုလည်း စောင့်ဖတ်နေမယ်နော် အစ်မ…
မြန်မာပြည်မှာ အရင်တုန်းက Trust မရှိဘူး။ ခုတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောလို့ရပြီ ထင်တာပဲ။ အရင်က သတင်းစာတွေ လူအတော်များများက မဖတ်ကြဘူး။ ခုတော့ ဖတ်လာကြပြီ။ ဒါလည်း ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပဲ။ အရင်က မိဘတွေနဲ့ သားသမီးတွေက အပြန်အလှန်လေးစားတယ်။ ခုက မိဘတွေက သားသမီးတွေကို မလေးစားဘူး။ ပြောလိုက်ရင် မရှည်နဲ ငါ နင်တို့ထက် လူဖြစ်လာတာတို့၊ နင်တို့ထက် တတ်လို့ သိလို့ မိဘလုပ်နေတာတို့ အပြောများလာတယ်။ ဒါကြောင့် သားသမီးနဲ့ မိဘကြား သဟဇာတ မတည့်တာတွေ ဖြစ်လာတာ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားပေးရမယ်၊ သူများကိုလည်း အားပေးနိုင်ရမယ်။ အဲ့စကားကို အပြည့်ဝထောက်ခံတယ် ခုဖြစ်နေတဲ့ ခေတ်က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အားပေးဖို့မပြောနဲ့ သူများကိုအားပေးဖို့ဆို တာ ပိုဝေးတယ် ။
ခုက အားပေးဖို့နေနေသာသာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ပုတ်ချဖို့ပဲ ချောင်းနေကြတာ များတယ်။ မုဒိတာ မပွားနိုင်ကြဘူး။ ပြင်မယ်ဆို ပြင်စရာတွေ အများကြီးပဲ။ တစ်ယောက် အခက်အခဲဖြစ်ရင် ကျိတ်ဝမ်းသာနေကြတာတွေကြီးပဲ။ အဲလိုလောကကြီးဖြစ်နေတယ်။